Rafael Benitez: Chelsea way ku guuleysan kartaa EPL. - Caasimada Online
Home Warar Rafael Benitez: Chelsea way ku guuleysan kartaa EPL.
Rafael Benitez: Chelsea way ku guuleysan kartaa EPL.
Taageerayaasha Chelsea ayaa mar kale ay sii hurineysaa inaysan awalba ku qanacsaneyn Rafael Benitez ka dib markii uu kulankiisii labaad barbaro goolal la’aan ah la galay Fulham.
Taageerayaasha ayaa mar kale Boorar kusoo xardhaday ‘Waxaan dooneyaa Chelsea-deenii oo soo laabata’ [we want our Chelsea back], xilli kooxda heysata Horyaalka Yurub aysan lix kulan guul gaarin, waxayna todobo dhibcood ka dambeysaa hugaamiyeyaasha Manchester United.
Ninka aadka loo hadal haayo Fernando Torres ayaana weli ku socda wadadiisa uusan goolasha ku dhalineyn ka dib markii uu gool la’aan ahaa Toban saacadood iyo 49 daqiiqo.
Benitez ayaa yiri ciyaarta ka dib “Qof walba oo halkaan jooga wuu niyad jabay. Wey nagu adkeyd Fulham, kuwaasoo si adag u shaqeeyey, laakiin kulamadaan waaa inaan guuleysanaa. Ciyaarta waynu xakameynay laakiin weli waa inaan goolal dhalinaa.”
Waa markii ugu horeysay oo aysan Chelsea laba kulan oo isku xigta oo garoonkooda ah goolal ku dhalin tan iyo September 2007dii. Benitez ayaana noqonaaya tababarihii labaad ee ka hoos shaqeeya Roman Abramovich ee ku guul dareysta inuu guul gaaro labadiisa kulan ee furintaanka ah.Kankale waa Avram Grant.
Laakiin Benitez ayaa qaba inay Chelsea Horyaalka kula tartami karto United iyo Manchester City, kuwaasoo mar kale isku taagaya inay ku guuleysataan.
“Maxaanan u sameyn Karin?” ayuu yiri: “Weli waqti badan ayaa dhiman. Waa inaan kor isku qaadnaa. Markaas fursad ayaan u heli doonaa.
“Xasuuso xilli ciyaareedkii hore markaas oo City hugaanka looga qabtay si fudud ka dib waxay u baahdeen inay guuleystaan ilaa kulankoodii ugu dambeeyey. Waxaan heysnaa waqti dheer oo ka harsan tartanka.”